Macaamiisha TV Hit sheegan kartaa magdhow - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Macaamiisha TV Hit sheegan kartaa magdhow
Macaamiisha TV Hit sheegan kartaa magdhowKumanaan ka mid ah macaamiisha TV ay saameeyeen adeegga ATN la xiray. Shaqsiyaadkani haatan sheegan kartaa magdhow ka shirkadda, sida ay labada hay'adda macaamiisha iyo la taliyayaal Organization Telekom.
Sida ATN-sanduuqyada yihiin dhigay-up sida soo socota: Sida macaamiisha cusub, aad bixiso in ka badan 2,000 oo karoon sanduuq, oo aad markaas iska - laakiin in waxa loo isticmaali karaa oo kaliya si aad u hesho sahayda ATN. macaamiisha ayaa sidoo kale bixisaa Times ah hal ilaa laba boqol oo doolar sanadkiiba, taas oo ku xidhan kala duwan.
Waa maxay fursadaha magdhow jira?
- Guud ahaan, waxaad xaq u leedahay magdhow haddii aad soo iibsatay adeeg ah oo aan la shaqeeyo.
- Haddii adeegga hoos waa laakiin ka dib soo noqoto, macaamiisha ah wuxuu xaq u leeyahay magdhow nasashada.
macaamiisha waxaa xaq u leedahay inaad soo celiyo ee sanduuqa?
- Tan iyo markii ay dhacdo in tani ay tahay oo ku saabsan jebinta ah copyright looga shakisan yahay, ma waxay u badan tahay in aan adeegga la bilaabay. Sidaa darteed, macaamiisha codsan kartaa in iibka ah ee sanduuqa kor iyo in lacag la bixiyo.
- Haddii aan, sanduuqa loogu xidhi karaa bixiyaha adeegga kale, macaamiisha dalban karaa in la iibiyo waa la joojiyay. Xaaladdan oo kale, sanduuqa xiran yahay galay ATN oo sidaas daraaddeed iibka waa la sarraysiin, sida laga soo xigtay hey'adda macaamiisha.
Maxaa dhacaya haddii shirkadda diido?
- Haddii aan, shirkadda ku iibinaya sanduuqa ku heshiin doonaan in ay soo celiyo, su'aasha waxaa laga yaabaa in sida muran of Cabashooyinka Consumer, ARN.
- Haddii qofka macaamiisha ah ku guuleysan lahaa khilaafka, ma aha qaar in lacagta oo dhan waa in la bixiyaa. Haddii sanduuqa ayaa la isticmaali karo in muddo ah, waxaa jira heshiis ah oo ku salaysan muddada ay awoodeen in ay ka faa'ideysan.
Yaan la xiriiri karaa haddii aan qabo su'aalo ku saabsan xuquuqdooda?
- Taliyayaal Agency Consumer jawaabi doona su'aalaha ku saabsan goobta Hey macaamiisha! One dooran kartaa inta u dhexeysa yeedhayso, email iyo chat ama la xiriir via warbaahinta bulshada.
- Taliyayaal xagga Telecom ayaa sidoo kale ka jawaabo su'aalaha via uu website.
- The macmiisha ee degmada ayaa sidoo kale ku caawin kara. Meelaha lagala xiriiro waxaa laga heli karaa bogga internetka ee degmada kasta.
Ujecel talo qaar ka mid ah?
- No, talo waa lacag la'aan in kiisaska oo dhan.
Ma heli karaa caawimo si loo qorsheeyo cabasho u Cabashooyinka Consumer, ARN?
- Midkoodna Agency Consumer ama la taliyayaal isgaarsiinta fursad u leeyihiin in ay habeeyaan cabasho.
- Waxa suurto gal ah la taliyayaal macaamiisha ee degmada caawiyo teeb gaadhsiin.
On Telecoms taliyayaal ugu dambeyntii tuur lahaa in Afeef ah:
- Waxaa jira farqi u dhexeeya isagoo xaq u leedahay in magdhow iyo in ay si dhab ah u hesho magdhow. Shirkadda bixin doontaa in la'aanta ah ee lacagta, ayaa sheegay in taliyaha Kristian Ramirez.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/drabbade-tv-kunder-kan-krava-ersattning-111.11.2016. 20:19	Categories